IJetBlue ingeza izindiza zaseMiami ezinqumweni zayo Zonyaka Omusha
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Airlines » IJetBlue ingeza izindiza zaseMiami ezinqumweni zayo Zonyaka Omusha
Airlines • Airport • zezindiza • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Izindaba • Ezokuvakasha • Transportation • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izimfihlo Zokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • I-USA Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezihlukahlukene
Isithwali esinezindleko eziphansi JetBlue Airways uzibophezele ngokuphelele namuhla kwesinye sezinqumo zawo zoNyaka Omusha: ukwethula izindiza zokuqala ngqa eMiami International Airport.
IJetBlue ibeke uFebhuwari 11, 2021 - 21 wezindizast usuku lokuzalwa - njengosuku lokuqala lokwandiswa komzila weMiami, okuzofaka phakathi ukusebenzela amadolobha amane ase-US: iBoston (kuze kube kane ngosuku); Los Angeles (kuze kube kabili ngosuku); ENew York-JFK (kuze kube kane ngosuku); neNewark (kuze kube kane ngosuku). Umzila weMiami-Los Angeles uzofaka iJetBlue Mint, ulwazi lokuhamba oluphambili lwendiza. Izindiza ezihamba phambili zansuku zonke eziyi-14 zingenza ngokushesha iJetBlue ibe ngenye yezindiza ezihamba phambili ezihamba phambili zeMIA.
"Ukwethulwa komlando kukaJetBlue esifundeni saseMiami-Dade ngezindiza ezifika ku-14 nsuku zonke kuyizindaba ezimnandi emindenini yethu, embonini yezokuvakasha, nakwezamabhizinisi, njengoba sisebenza ukusiza umnotho wethu ubuye ubhadane," kusho iMeya kaMasipala waseMiami-Dade uDaniella Levine Cava. “Ngiyamukela ngeqholo iJetBlue eMiami-Dade. Futhi kuyangijabulisa ukubabona bethatha izinyathelo ezibalulekile ukugcina abagibeli nabasebenzi bephephile futhi bephilile. ”
Ikomkhulu layo eNew York futhi elaziwa njengeHometown Airline yaseNew York, iJetBlue isebenza cishe iBlackCities yasekhaya neyamazwe angaba yikhulu - kungekudala izofaka neMagic City.
“IJetBlue inomlando omude wokusebenzela iFlorida futhi sijabule kakhulu ukunweba ubukhona bethu esikhumulweni sezindiza iMiami International Airport - isikhumulo sezindiza esimatasa kakhulu e-US esingasisebenzeli njengamanje - lapho singenisa khona inkonzo yethu ewine imiklomelo kanye nemali yokugibela ephansi kuze kube ngaphezulu abahambi eSouth Florida, ”kusho uScott Laurence, oyinhloko yezimali nokuhlela, uJetBlue. "Ngenkonzo yakwaJetBlue manje esukela eMiami iya eFort Lauderdale iye eWest Palm sinenhlanganisela yomsebenzi esizowina ezosibekela impumelelo eqhubekayo eSunshine State."
"Ngifisela iJetBlue ukubonga okukhulu nokuhalalisela ngokwenza lokhu kukhuliswa okukhulu kwe-MIA, kanye nokutshala kwabo okukhulu kwezindiza eziya emakethe yaseMiami," kusho uLester Sola, uMqondisi kanye noMphathi we-MIA. “Ukwamukela enye yezinkampani ezihola ngentengo ephansi emhlabeni nezindiza ezimatasa kakhulu kunethiwekhi yethu kungumcimbi ophawuleka kakhulu emlandweni wesikhumulo sethu. Izindiza zabo ezintsha zansuku zonke emizileni emine ethandwayo yaseMelika zinikeza abagibeli bethu imenyu ehlukahlukene yezindlela zokuhamba futhi kuzokhuphula imali engenayo yebhizinisi nokwakha amathuba omsebenzi emphakathini wethu. ”
Ukundiza kuqala ngo-Agasti: Seychelles irekhoda okuhle kakhulu ...
Isikhulu Esiphethe Esisha Sithatha Isikhungo Sokuvakasha eVail
Ukudutshulwa Kuqhume: IPentagon Building On Lockdown
Ezokuvakasha ZaseMexico Zilinyazwe Ukuhamba Okungabalulekile Kwe-US ...
Umfutho womthengi uyaqhubeka ngohlobo lwe-10 lwe-IMEX ...
Abangu-8 Kwabangu-10 BaseMelika Basekela Amapasi Okugoma